Geekbench na-akwado ụfọdụ atụmatụ nke Realme GT 5G | Gam akporosis
Geekbench na-akwado ụfọdụ atụmatụ nke Realme GT 5G
El Ezigbo GT 5G na-ahapụ ịhapụ. Ọ ga-abụ ihe dị ka ụbọchị atọ ka anyị ga-amata ya kpamkpam n'ihi na ngosi na mmemme mmemme nke ama ama a ga-eme na Machị 4, dịka Anyị agwaworị ya n'oge kwesịrị ekwesị.
Na mmechi, Geekbench nwalere ekwentị ahụ, na-ekpughe ma ọ bụ na-egosi ụfọdụ atụmatụ ya na nkọwapụta teknụzụ ya. Ndepụta ahụ kwuru Qualcomm Snapdragon 888, chipset kachasị ike nke American semiconductor emeputa maka 2021 a.
Nke a bụ ihe Geekbench na-ekwu banyere Realme GT 5G
Dabere na ihe ndepụta benchmark na Realme GT 5G pụta ìhè, a ga-emepe smartphone ahụ na sistemụ arụmọrụ nke gam akporo 11, ihe anyị tụrụ anya ya. N'aka nke ya, dịka anyị mere ka ọ pụta ìhè, Snapdragon 888 ga-abụ SoC nke na-enye gị ike na ike yana LPDDR5 RAM nke, dabere na Geekbench, bụ 12 GB. Agbanyeghị, a ga-enwekwa ụdị 8GB, yana nhọrọ abụọ 128GB na 256GB n'ime ohere nchekwa dị n'ime ga-abụ ụdị UFS 3.1.
Ekwuru na Realme GT 5G ga-abịa 125W UltraDart super technology ngwa ngwa. Ekele maka nke a, anyị ga-enweta ọsọ ọsọ site na 0% gaa na 100% n'ihe dị ka nkeji 30 ma ọ bụ, dabere na ike batrị ngwaọrụ ahụ, nke amabeghị, ọ ga-abụ obere oge. Na mgbakwunye na nke a, a na-eche na batrị ekwentị ga-adị n'etiti 4.500 na 5.000 mAh.
Realme GT 5G na Geekbench na Snapdragon 888
N'aka nke ọzọ, ihuenyo nke ngwaọrụ ahụ ga-abụ ihe dịka sentimita 6.8 ma gosipụta ọnụego ume nke 120 Hz. N'aka nke ya, igwefoto quad ọ ga-enwe ga-eduzi ya site na isi ihe mmetụta 64 MP.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Geekbench na-akwado ụfọdụ atụmatụ nke Realme GT 5G
Top Amazon na-emekọ - Izu nke Machị 1 ruo 7, 2021